တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ထိုငျးဘုရငျ့အတိုငျပငျခံ ကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌဖွဈသူ General Prem Tinsulanonda ကှယျလှနျခွငျးအတှကျ ဝမျးနညျးခွငျး မှတျတမျးတှငျ လကျမှတျရေးထိုး » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ထိုင်းဘုရင့်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ General Prem Tinsulanonda ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် ၀မ်းနည်းခြင်းမှတ်တမ်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင်နေပြည်တော်လေဆိပ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာရာ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak နှင့်တာဝန်ရှိသူများကလေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်၊ ဒွန်မောင်းလေဆိပ် (Win – 6) သို့ရောက်ရှိရာ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ General Peerapong Maungboonchoo ၊ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်နှင့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများက လေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ် ဆက်ကြသည်။
ယင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုင်းဘုရင့် အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ရုံးသို့ ရောက်ရှိရာ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် General Ponpipat Benyasri ၊ ထိုင်းဘုရင့် အတိုင်ပင်ခံရုံး၏ ခေတ္တအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Krit Garnjana Goonchern နှင့်ထိုင်းဘုရင့်တပ်မ တော်အရာရှိကြီးများက ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။ ၎င်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများသည် ထိုင်းဘုရင့်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ General Prem Tinsulanonda ၏ဓာတ်ပုံအားဂါရ၀ပြုကြပြီး ၀မ်းနည်းခြင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်အသီးသီး မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်ရေး ထိုးကြသည်။
ယင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ဘန်ကောက်ပိုစ့်သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်က ထိုင်းဘုရင့်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကွယ်လွန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှတ်ရဖွယ်ရှိခဲ့သည့် အကြောင်းအရာ များအားမေးမြန်းမှုအပေါ်ပြန်လည်ဖြေကြား သည်။
ဆက်လက်ပြီးတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် Wat Benchamabophit ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ရောက်ရှိရာ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Apirak Kongsompong ကကြိုဆို နှုတ်ဆက်သည်။ ထို့နောက်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့်အတူ ထိုင်းဘုရင့်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏ ရုပ်ကလာပ် အားဂါရ၀ပြုကြသည်။
ထိုင်းဘုရင့်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ General Prem Tinsulanonda သည် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်တွင် ထိုင်းတော်ဝင်စစ်တက္ကသိုလ်၌တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အသက် ၃၉ နှစ် အရွယ်၌ စစ်မှုထမ်းလျက်ဖြင့်ပင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မတီတွင် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ စစ်ဘက်တွင်ထူးချွန်သည့်အရာရှိ တစ်ဦးဖြစ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးဘက်တွင်လည်း လွှတ်တော်အမတ်၊ ၀န်ကြီးချုပ်အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး၊ ၀န်ကြီးတာဝန်များသာမက ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ သက်တမ်း နှစ်ခုတိုင်အောင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး တတိယသက်တမ်းအတွက် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ကမ်းလှမ်းမှုအားငြင်းပယ်ခဲ့ကာ ထိုင်းဘုရင့်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ပေးခန့် အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ တာဝန်ထမ်းဆောင် ချိန်ကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကာ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက် ခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ် ဒွန်မောင်းလေဆိပ် (Win – 6)မှပြန်လည်ထွက်ခွာ ကြပြီး ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများကလေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထိုငျးဘုရငျ့အတိုငျပငျခံကောငျစီဥက်ကဋ်ဌဖွဈသူ General Prem Tinsulanonda ကှယျလှနျခွငျးအတှကျ ဝမျးနညျးခွငျးမှတျတမျးတှငျလကျမှတျရေးထိုးရနျအတှကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ယနနေံ့နကျ ပိုငျးတှငျနပွေညျတျောလဆေိပျမှ ထိုငျးနိုငျငံသို့ထှကျခှာရာ ဒုတိယ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ညှိနှိုငျး ကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦးနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားကလဆေိပျတှငျ ပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဘနျကောကျမွို့ရှိ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျ၊ ဒှနျမောငျးလဆေိပျ (Win – 6) သို့ရောကျရှိရာ ထိုငျးနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးမြိုးမွငျ့သနျး၊ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ General Peerapong Maungboonchoo ၊ မွနျမာစဈသံ (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ ခငျဇျောနှငျ့ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားက လဆေိပျတှငျကွိုဆိုနှုတျ ဆကျကွသညျ။
ယငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ထိုငျးဘုရငျ့ အတိုငျပငျခံကောငျစီ ရုံးသို့ ရောကျရှိရာ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ General Ponpipat Benyasri ၊ ထိုငျးဘုရငျ့ အတိုငျပငျခံရုံး၏ ခတ်ေတအထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျ Mr. Krit Garnjana Goonchern နှငျ့ထိုငျးဘုရငျ့တပျမ တျောအရာရှိကွီးမြားက ကွိုဆို နှုတျဆကျကွသညျ။ ၎င်းငျးနောကျ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြားသညျ ထိုငျးဘုရငျ့အတိုငျပငျခံကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ General Prem Tinsulanonda ၏ဓာတျပုံအားဂါရဝပွုကွပွီး ဝမျးနညျးခွငျးမှတျတမျးစာအုပျတှငျအသီးသီး မှတျတမျးတငျ လကျမှတျရေး ထိုးကွသညျ။
ယငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ ဘနျကောကျပိုဈ့သတငျးဌာနမှ သတငျးထောကျက ထိုငျးဘုရငျ့အတိုငျပငျခံကောငျစီဥက်ကဋ်ဌကှယျလှနျခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ အမှတျရဖှယျရှိခဲ့သညျ့ အကွောငျးအရာ မြားအားမေးမွနျးမှုအပျေါပွနျလညျဖွကွေား သညျ။
ဆကျလကျပွီးတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ Wat Benchamabophit ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးသို့ ရောကျရှိရာ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျော ကွညျးတပျဦးစီးခြုပျ General Apirak Kongsompong ကကွိုဆို နှုတျဆကျသညျ။ ထို့နောကျတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျော ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ၊ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားနှငျ့အတူ ထိုငျးဘုရငျ့အတိုငျပငျခံကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၏ ရုပျကလာပျ အားဂါရဝပွုကွသညျ။
ထိုငျးဘုရငျ့အတိုငျပငျခံကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ General Prem Tinsulanonda သညျ အသကျ ၂၁ နှဈအရှယျတှငျ ထိုငျးတျောဝငျစဈတက်ကသိုလျ၌တကျရောကျခဲ့ပွီး အသကျ ၃၉ နှဈ အရှယျ၌ စဈမှုထမျးလကျြဖွငျ့ပငျ ထိုငျးနိုငျငံ၏ အခွခေံဥပဒရေေးဆှဲရေးကျောမတီတှငျ တာဝနျပေးအပျခွငျးခံခဲ့ရသညျ။ စဈဘကျတှငျထူးခြှနျသညျ့အရာရှိ တဈဦးဖွဈသကဲ့သို့ နိုငျငံရေးဘကျတှငျလညျး လှတျတျောအမတျ၊ ဝနျကွီးခြုပျအကွံပေးအဖှဲ့ဝငျ၊ ဒုတိယဝနျကွီး၊ ဝနျကွီးတာဝနျမြားသာမက ဝနျကွီးခြုပျအဖွဈ ၁၉၈၀ ခုနှဈမှ ၁၉၈၈ ခုနှဈအထိ သကျတမျး နှဈခုတိုငျအောငျ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူဖွဈပွီး တတိယသကျတမျးအတှကျ ဆကျလကျ တာဝနျထမျးဆောငျရနျ ကမျးလှမျးမှုအားငွငျးပယျခဲ့ကာ ထိုငျးဘုရငျ့အတိုငျပငျခံကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ အဖွဈနှဈပေါငျးမြားစှာ တာဝနျပေးခနျ့ အပျခွငျးခံခဲ့ရသူဖွဈသညျ။ တာဝနျထမျးဆောငျ ခြိနျကာလအတှငျး ထိုငျးနိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ စှမျးစှမျးတမံဆောငျရှကျခဲ့ပွီး မွနျမာ့တပျမတျောခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့လညျး ရငျးနှီးကြှမျးဝငျသူတဈဦးဖွဈကာ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမြား ပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာအောငျဆောငျရှကျ ခဲ့သူတဈဦး ဖွဈသညျ။
မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ဘနျကောကျမွို့ရှိ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျ ဒှနျမောငျးလဆေိပျ (Win – 6)မှပွနျလညျထှကျခှာ ကွပွီး ညနပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောလဆေိပျသို့ရောကျရှိရာ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး)ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီးစိုးဝငျးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားကလဆေိပျတှငျ ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။